musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Allegiant inozivisa nendege nyowani dzisingamise Key West
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Allegiant anotarisira kuti Key West ive hombe dhizaini kune vafambi vezororo vanotsvaga isingakwanisike, inzvimbo yakanaka yezororo yekunodziya nguva dzechando.
Allegiant kutanga ndege kubva kuAsheville Regional Airport kuenda kuKey West munaNovember 18.
Anobvumirana kutanga basa kubva kuSt. Pete-Clearwater International Airport kuenda kuKey West munaNovember 19.
Allegiant anoshandisa ndege yeAirbus A319 munzira itsva dzeKey West.
Allegiant ichawedzera basa risingamire kubva kuNorth Carolina Asheville Regional Airport (AVL) kuenda kuKey West West International Airport (EYW) kutanga munaNovember 18, uye basa risingamire kubva kuFlorida St. Pete-Clearwater International Airport (PIE) kuguta rechitsuwa kutanga munaNovember 19.
Allegiant inoronga kushandira Key West kaviri pasvondo uye pamazuva akasiyana pane imwe neimwe yenzira nyowani, uchishandisa Airbus Ndege yeA319.
"Key West ndeimwe yenzvimbo dzakatsvakwa zvakanyanya muUS izvozvi," akadaro Drew Wells, mutevedzeri wemutungamiri weAllegiant wezvemari uye marongero enetiweki. "Tinotarisira kuti ndiwo mukana wakakura wevashanyi vanotsvaga nzvimbo inokwanisika, yezororo yakanakira kutandara munguva yechando."
Muna Chikumi, Allegiant akawedzera kaviri-kwevhiki kushanda kusingamire kuKey West paAirbus A319 ndege kubva kuNashville International Airport (BNA), Pittsburgh International Airport (PIT) uye Cincinnati / Northern Kentucky International Airport (CVG).
“Tinofara kugamuchira vashanyi vekuNorth Carolina vanobva mudunhu reAsheville uye nevavakidzani vedu veFlorida kubva kuTampa-St. Pete sezvo sevhisi nyowani iyi ichabatsira kubvisa mota kubva mukufamba muOverseas Highway, "akadaro Richard Strickland, director wenhandare dzeFlorida Keys 'Monroe County.